HomeAqoonta Sariirta6 Sir Oo Ku Saabsan Farxada Kulanka Sariirta
Kadib marka ay dhamaato Xaflada Arooska oo ay Labada Lamaane kali ku noqdaan Guriga markii ugu horaysay waxa laga yaabaa in ay maskaxdooda ku soo dhacdo waxyaabo badan hadii ay noqoto fikrado xun kuwo fiican iyada oo ay isku darsamayaan dareen Farxadeed iyo waliba mid Naxdin ah iyo dareen jacayl iyo wal-wal ah.
Laakiin ugu dambayn labada Lamaane ayaa doonaya in ay Habneekaas ugu dhamaato farxad iyo jacayl iyo waliba dareeno kala duwan.
Sidaas darteed waxa aan halkan kuugu soo gudbin doonaa 10 sir oo ku saabsan kulanka farxada kulanka sariirta.
1.Marna kor ha u qaadin waxa aad filanayso sababta oo ah waxa aad habeenkaas gacalisadaada ama Gacaliyahaaga kala kulmi kartaa wax aanad jeclaysan waxana laga yaabaa in aad dareentaan xishood iyo waliba kalsooni yaraan labada dhinac ah.
2.Habeenka ku bilowday jawi qurux badan idinka oo ku bilaabanaya Hees jacayl ah oo aad jeceshihiin labadinuba waliba in badan wada dhagaysateen taas oo idin soo xasuusinaysa wakhtigii quruxda badnaa ee aad soo wada qaadateen.
3.Isku daya in aad isku dhawaataan waliba gacmaha is qabsataan idinka oo dib u xasuusanaya xafladii iyo farxadii habeenkaas aad wada qaadateen idinka oo ka sheekaysanaay Wakhtigii Haasaawaha iyo waliba sida aad isku jeceshihiin idinta oo waliba ku faanaya jacalkiina iyo waliba in aad ugu dambayn is hesheen.
4.Isku daya in aad cuntaan cunta kicinaysa dareenkiina waliba ah mid khafiif ah waliba isugu diyaarinaya kulankiina sariirta
5.Ka Sheekaysta Arimo qosol iyo farxad leh taas oo idinka caawinaysa in aad meesha ka saartaan wax naxdin iyo wal-wal ah oo dhexdiina ah.
6.Gabdhu waa in ay xidhato dhar quruxdeeda soo saaraya laakiin aan jidhkeeda gabi ahaan muujinayn sabata oo ah waxa ay arintaas kugu keenaysaa Xishood.
7.Waa In Uu Ninku bilaabo kulanka sariirta sababta oo ah dumarku Somalidu inta badan way xiishood badanyihiin sidaas darteed waa in uu Ninku xaaskiisa ka tiro xishoodka isaga oo kulanka sariirta ku bilaabaya kalmado jacayl ah iyo waliba shumis.